Baaritaankii lagu hayay xiriirka Trump iyo Ruushka oo waji cusub yeeshay - BBC News Somali
Baaritaankii lagu hayay xiriirka Trump iyo Ruushka oo waji cusub yeeshay
Madaxweyne Trump ayaa marar badan baaritaankan ku tilmaamay "arrin la siyaasadeeyay oo si gaar ah loogu bartilmaameedsanayo isaga".
Baaritaanka doorkii Ruushka ee doorashadii Mareykanka
Mr Durham ayaa loo howlgaliyay inuu go'aan kasoo saaro sharci ahaanshaha xogta laga aruuriyay ol'olihii madaxweyne Trump ee doorashadii dhacday 2016-kii.
Waa nin si weyn loo qaddariyo oo horay u sameeyay baaritaanno la xiriira wakiillada hay'adda FBI-da iyo dambiyada la maleego.
Wuxuu sidoo kale baaritaanno kusoo sameeyay muuqaallo laga duubay su'aalo weydiinta ay sameeyaan saraakiisha laanta sirdoonka Mareykanka ee CIA-da.
Madaxweyne Trump ayaa marar badan cambaareeyay baaritaankan
Bishii April, Mr Barr ayaa xubno ka tirsan aqalka wakiillada ee Congress-ka u sheegay inuu aaminsan yahay in "la basaasay" ol'olihii Trump ee doorashadii 2016-kii, wuxuuna intaas ku daray: "Su'aashu waxay ka taagan tahay in si ku talagal ah waddada loogu banneeyay arrintaas iyo inkale. Aniguna ma dhahayo ku talagal looma sameynin sidaas laakiin waa inaan caddeeyo".
Balse Madaxweyne Trump ayaa sheegay in isagu uusan Mr Barr ku amrin inuu dib u eegista ku sameeyo warbixinta laga soo saaray baaritaanka, Inkastoo uu yiri: "Waxaan aad ugu faraxsanahay tallaabada uu qaaday xeer ilaaliyaheenna, wuxuu sameeyay arrin aad u fiican".
Xogta lagu aruuriyay warbixinta Mueller oo ka kooban 448 bog ayaa lagu sheegay inaysan jirin wax dambi ah oo ka muuqda xiriirka la sheegay inuu dhex maray ol'olihii Trump iyo xukuumadda Moscow, 2016-kii.
14 Maajo 2021